काठमाडौँ। भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक फोनपे पेमेन्ट सर्विस लिमिटेड आइएसओ २७००१ः२०१३ बाट प्रमाणिकरण हुन सफल भएको छ। फोनपेले आफ्नो सेवामा उच्च गुणस्तरियता प्रदान गरेको हुनाले आइएसओ (इन्फरमेशन सेक्यूरिटी म्यानेजमेन्ट)२७००१ः२०१३ बाट प्रमाणपत्र पाएको हो।
काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनको अनुमती प्राप्त स्मार्टच्वाईस टेक्नोलोजिज लिमिटेड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमती प्राप्त सेलकम प्रा. लि. (सेलपे) बीच स्मार्ट क्यूआर मार्फत भुक्क्तानी सेवा सन्चालनको लागी सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
एजेन्सी । माइक्रोसफ्टका सहसंस्थापक बिल गेट्सले बुधबार आफूलाई कोभिड–१९ सङ्क्रमण भएको भन्दै आफ्नै निवासमा एकान्त (क्वारेन्टाइन) मा रहेको जानकारी गराएका छन्।
नेपाल टेलिकमको निर्वाचन अफर, ९८ रूपैयाँमा तीन दिन प्रयोग गर्न सकिने ६ जिबी डेटा
काठमाडौँ। नेपाल टेलिकमले निर्वाचन विशेष अफर ल्याएको छ। आगामी वैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा टेलिकमले जिएसएम प्रिपेड तथा पोस्टपेड मोबाइल सेवामा निर्वाचन अफर उपलब्ध गराउने भएको हो। अफरअन्तर्गत प्रयोगकर्ताहरूले ९८ रूपैयाँमा आवश्यकता अनुसार जुनसुकै नेटवर्कमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भ्वाइस प्याक, एसएमएस प्याक र डेटा लिन सक्नेछन्।
काठमाडौँ। डिशहोम फाईवरनेटको बिक्री तथा विक्रीपछिको सेवा प्रदान गर्न सुख्खडसल, महेन्द्रनगर डिशहोम फाईवरनेट सोरुमको उद्घ्घाटन गरिएको छ। सो सोरुमको सञ्चालन दिपक ट्रेडर्सले गर्नेछ। सोरुम उद्घ्घाटन डिशहोमका तर्फवाट एरिया म्यानेजर निर्मल आचार्य सेल्स अफिसर कमल रिमाल सर्बिस सेन्टर सुपर भाईजर ज्योती फार्सवान, रि–एलाईमेन्ट टेक्निसियन अनुज भट्ट र डिलरका म्यानेजर जगदिश भट्टको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो।
सूचना तथा सञ्चार दिवसमा टेलिकमले 'प्रविधि दिवस' अफर दिँदै
काठमाडौँ। यही वैशाख १९ गते अर्थात् मे २ तारिखमा मनाइने चौथो राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस( ­२०७९ को अवसरमा नेपाल टेलिकमले राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस अफर उपलब्ध गराउने भएको छ। कम्पनीका ग्राहकहरूका लागि टेलिकमले अनलिमिटेड डेटा र भ्वाइससहितको कम्बो प्याक, डेटा प्याक र बोनस अन रिचार्ज उपलब्ध गराउने भएको हो।
टिकटकमा निर्वाचनको सन्देशमूलक भिडियोको भ्यूज ५० लाख भए ५० हजार पुरस्कार दिइने
काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सन्देशमूलक भिडियोलाई टिकटक बनाएर ५० लाख दर्शक ‘भ्यूज’ पुर्‍याउनेलाई ५० हजार पुरस्कार दिने भएको छ। त्यस्तै, ३० लाख भ्यूज पुर्‍याउनेलाई ३० हजार र २० लाख भ्यूज पुर्‍याउनेलाई २० हजार रूपैयाँ पुरस्कार दिने पनि आयोगले जनाएको छ।
ल्क एसएमएस प्रणालीको परिष्कृत संस्करण भएको कम्पनीले जनाएको छ। स्प्यारो भोइसले व्यक्ति वा संस्थालाई आफ्नो सन्देश अडियो ढाँचामा एकैपटक फोन कलमार्फत ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई प्रसारण गर्न मद्दत गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।